‘कांग्रेसमा अब अग्रजलाई सम्मान, युवालाई काम’ – Mediagriha
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस संखुवासभा​का सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठ​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
मुख्यतः यतिबेला नेपाली कांग्रेसको अगाडि कम्युनिस्ट अतिवादबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्को कुरा, जुन स्वास्थ्य संकट हामीले भोगिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि चिरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।
साथै, नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीमाझ छ । यी सबै कुरालाई समीक्षा गर्दै हामीले महाधिवेशन पनि गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । किनभने नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस नै हो । अहिले देखिएका यी सबै समस्यालाई चिर्न सक्ने नेतृत्व हामीले खोजिरहेका छौँ ।
पार्टीभित्र जति पनि असन्तुष्ट सदस्यहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई समेट्न सक्ने खालको नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले चाहेको नेतृत्व त्यही खालको हो । कसको मान्छे, को मान्छे भन्दा पनि सबैखाले समस्यालाई मिलाएर जान सक्ने नेतृत्व सबैले चाहिराखेका छौँ ।
महाधिवेशन पनि अन्योलमै छ । कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टी अधिवेशन नै गर्न नसकेको भन्ने अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्ने छ । अधिवेशन गराउनै पर्छ । किनभने यदि हामीले वडा तहदेखि माथिसम्मकै सबै गर्न सकेनौँ भने पनि विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । महाधिवेशनबारे विभिन्न अड्कल र अनुमानका कुराहरु आइरहेका छन् । अरु विकल्पकहरुबारे खुल्ला रुपमा छलफल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गराउनै पर्ने आजको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।
युवा नेतृत्वको बहस पनि लामो समयदेखि कांग्रेसमा चलिरहेको छ । जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई बहन गर्ने क्षमता युवामा छ । त्यस्ता युवा पार्टीमा नभएको हुँदै होइन । परिपक्व छैनन् पनि हुँदै होइन । तथापि, हामीले अग्रजहरुको सम्मान गरेर अघि बढ्न सक्ने मान्छेको खोजीमा लाग्नुपर्छ । ‘अग्रजलाई सम्मान, युवालाई काम’ भन्ने नारा यस अघिदेखि नै चलेको हो । त्यसलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण अग्रजहरुको सम्मान गरेर युवाहरुलाई प्रशस्त भूमिका दिन सक्ने नेतृत्व यो महाधिवेनले चयन गनुपर्छ ।
कांग्रेसमा परिवारवादको कुरा आउँछ । तर, त्यो समस्याका रुपमा रहेको देखिँदैन । पार्टीमा व्यक्तिगत र पारिवारिक योगदान गर्ने प्रशस्त छन् । परिवारको सन्दर्भमा कुरा गर्दै जाँदा कोइराला परिवार वा गणेशमानको परिवारलाई जोड्न खोजिएको हो । तर, त्यहाँ पनि त्यस्तो समस्या म देख्दिनँ । उहाँहरुको पनि आफ्नै लगानी र इतिहास पार्टीभित्र छ । उहाँहरुले आफ्नो रगत र पसिना पार्टीभित्र बगाउनुभएको छ । यसलाई नै परिवारवाद भन्न मिल्दैन ।
कांग्रेस महाधिवेशनको मुखमा यतिबेला पार्टीलाई सत्ताको थप ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ । साथै, कोभिड–१९ महामारी, बाढी–पहिरोलगायतका समस्या पनि हामीले भोगिरहेका छौँ । अब यसका बीचमा हामी कोरोनाको कारणले नियमित तरिकाले अनि खुल्ला रुपले महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ भने विकल्पहरुमा छलफल हुन ढिला भइसक्यो । विभिन्न प्रविधिमार्फत पनि हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
अर्को कुरा विधानतः कसरी पार्टीलाई जोगाइराख्ने भन्ने सन्दर्भ पनि छ । वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले जति निर्वाचित गर्छौं ती प्रतिनिधिहरुले पालिकाको प्रतिनिधि छान्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । पालिका स्तरबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ ।
प्रदेशहरुको जिल्लामै भेला भएर निर्वाचन गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ भने १३ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरुबाटै विशेष महाधिवेशन गर्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ । संवैधानिक संकटबाट पार्टीको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसबाट पार पाउनका लागि केही न केही त गर्नै पर्छ । नेतृत्व अघि बढ्छ भने हामी अधिवेशन गराउन तयार छौँ । तर, त्यसो गर्न सकिँदैन भने भिन्न विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । नेताहरुलाई हामीले बारबार यसबारे सचेत गराइरहेका छौँ ।
नेतृत्व गम्भीर नबन्ने ?
माथिका सबै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै कांग्रेसको नेतृत्व गम्भीर मात्र होइन निकै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । अरुभन्दा पनि हामीसँग यतिबेला समय नै बाँकी छैन । निर्वाचन आयोगमा पनि हामीले कम्तीमा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली दिएर १९ दिनभित्र वडाको अधिवेशन गर्छौं भनेका छौँ । त्यहीकारण पनि छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ ।
भदौभित्र वडाको अधिवेशन सम्पन्न गरेर भए पनि संवैधानिक संकटबाट जोगाउनुपर्छ । भदौदेखि वडाको अधिवेशन सुरु गर्यौं भने कात्तिक–मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्न सक्छौँ । जसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहियो, इच्छाशक्ति भएपछि हामीले महाधिवेशन गर्नै पर्छ र सक्छौँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।
( श्रेष्ठ​ नेपाली कांग्रेस, संखुवासभाका सभापति हुन् )